Chọ Mma - Shanghai Comi Aroma Co., Ltd.
Glass ite Bottle
Bchọ Mma Glass karama
Bottle Ngosiputa Ngwa
Mmanụ iko karama
Nyefee Na Pertọ Mmanụ kalama
Personal Care Sprayer senti kalama
OEM ODM Ọrụ
Ebu nke Onwe
3D Sample Ime
Comi Okpukpo Ndidi Comi
Ihe ọzọ dị mkpa n’emezu anya gị achọrọ bụ otu esi mechie nkwakọ ngwaahịa gị.
Anyị na-enye ọtụtụ nhọrọ dị iche iche maka ịhọrọ site na, gụnyere ụcha agba, ime na mpepụta mmiri, imepụta ihe eji agba agba, na ịgba agba dị ka pearl, matte, aka dị nro, nke na-egbu maramara, na ntu oyi.
Moldkpụzi nkedo bụ usoro nrụpụta maka imepụta akụkụ site na ịgbanye ihe dị ọkụ na nke agwakọtara, dị ka iko na plastik, n'ime ebu ebe ọ na-ajụ oyi ma sie ike nhazi nke oghere. Nke a bụ oge zuru oke ịnweta ụcha ịchọrọ ka ọ bụrụ akụkụ nke ihe ahụ n'onwe ya, kama agbakwunye mgbe e mesịrị.
N'ime / n'èzí Spray
Raygba ihe mkpuchi na-enye ihe nwere ike ịmepụta agba ahaziri, imewe, ederede, ma ọ bụ ihe niile - na iko ma ọ bụ plastik. Dị ka aha ahụ na-egosi, na usoro a na-awụba ihe iji nweta mmetụta achọrọ - site na anya oyi, mmetụta ederede, otu ụdị agba agba maka ịmechaa ihe ọzọ, ma ọ bụ na ụdị ọ bụla a pụrụ iche na ya na ọtụtụ agba, fades ma ọ bụ gradients.
Usoro a na-emegharị anya nke chrome dị ọcha na arịa. Usoro a gụnyere ikpo ihe igwe na-ekpo ọkụ n'ime ụlọ mgbochi ruo mgbe ọ malitere ịmịpụ. Ngwongwo nke anwụrụ ọkụ na-ejikọta na agbụ na akpa ahụ, nke a na-agbanwegharị iji nyere aka hụ na itinye ngwa ngwa. Mgbe emechara usoro metalizing ahụ, a na-etinye mkpuchi topcoat na-arụ ọrụ na akpa ahụ.
EMEKA EME NA EME EGO
Bomịpụta ihe na-emepụta onyogho dị elu ma debossing na-emepụta ihe a kpụrụ akpụ. Usoro ndị a na-agbakwunye uru aha na ngwugwu site na ịmepụta akara ngosi pụrụ iche nke ndị ahịa nwere ike imetụ ma nwee mmetụta.
Usoro icho mma a bu uzo ozo nke itinye ihe ngebichi. A na-ebufe ink ahụ na akụkụ ahụ site na nrụgide na ihe mkpuchi silicone kpụ ọkụ n'ọnụ ma ọ bụ nwụọ. Maka otutu agba ma ọ bụ akara mmado nwere ụda olu, enwere ike iji akara mmụgharị nke ga-enye mma agba, ndebanye aha na ịsọ mpi.
Hydro-graphics, nke a makwaara dị ka mbipụta mmiri mmiri, mbipụta mbufe mmiri, nnyefe nnyefe mmiri, ntinye mmiri ma ọ bụ mbipụta cubic, bụ usoro nke itinye atụmatụ ndị e biri ebi na akụkụ atọ. Enwere ike iji usoro mmiri mee ihe na metal, plastik, iko, osisi siri ike, na ihe ndị ọzọ dị iche iche.
Na ihe ịchọ mma, ịma mma, na azụmaahịa nlekọta onwe onye, ​​mkpo bụ maka ejiji. Frosted mkpuchi na-arụ ọrụ dị mkpa n'ime ka ngwugwu gị kwụpụta na shelf mkpọsa.
Ma ọ bụ ederede na-acha oyi ma ọ bụ nke na-egbuke egbuke, mkpuchi na-enye ngwugwu gị otu ụdị mma.
AKWKWỌ / FOIL zọ
Okpomoku a na-ekpo ọkụ bụ usoro eji eme ihe eji eme ihe na-acha uhie uhie n'elu site na nchikota nke okpomọkụ na nrụgide. Okpomoku a na-ekpo ọkụ na-ewepụta ọdịdị na-egbu maramara ma dị okomoko na ọkpọkọ ịchọ mma, karama, ite, na mmechi ndị ọzọ. Acha foils na-abụkarị ọla edo na ọlaọcha, ma brush aluminum & opaque agba ndị dịnụ, ezigbo maka a mbinye aka imewe.
Tinye: No.1500 Tingwei Road, Jinshan District, Shanghai, China.
Gịnị bụ akara pụtara na senti bot ...
Ihe na-esi ísì ụtọ nke mmiri: otu ihe na-esi ísì ụtọ, d ...
Featured ngwaahịa - Sitemap - Ebe nrụọrụ weebụ